I-Parquet - design
Ukuqeda phansi ngezindlela eziningi kuthinta umkhathi ekamelweni. Ibhodi yeParquet iyinhlangano ebiza ngokwemvelo futhi ehlala njalo. Kuyathakazelisa hhayi kuphela izimbali ezihlukahlukene, kodwa futhi nokuklama nokubunjwa kwayo.
I-Parquet emklamo wangaphakathi: izinto eziyisisekelo zokuzikhethela
I-parquet ye-piece ifakwe ama-combs nama-grooves, ukugaya nokuvarnisha kuyadingeka. Ibhodi yeParquet ishibhile, ayidingi ukucubungula okungeziwe, iyesaba ukungena. Okunye okunye okuthengiswayo kanye nekhwalithi ngamabhodi amakhulu. Ngaphandle kokuqeda kwangaphandle, ibhodi elisezingeni eliphezulu livame ukusetshenziswa.
I-parquet yekhwalithi iphunga ngokhuni, i-tar ne-formaldehyde ekubunjweni akufanele kube. Hlola imikhiqizo ngaphambi kokuthenga ukuphahlazeka, iziphuphu, iglue, ukukhwabanisa. Umkhumbi ebhodini, umkhiqizo uthembekile kakhulu. Phakathi kokungapheli okugqoka kakhulu kubandakanya i-cherry, i-walnut, i-maple ne-oki. Ifulethi liwumlotha ofanelwe kahle.
Umklamo kanye nemibala ye-parquet
Ekamelweni elitholakala ngasentshonalanga noma enyakatho, kungcono ukubeka phansi phansi. Izobonisa ukukhanya, ngokubukeka isikhala sizokhula. Khetha ama-halftones, hhayi ama-snow-white. Ipansi elimnyama - inketho enhle kakhulu yokwenza umehluko ngodonga olukhanyayo, izesekeli zombala. Imibala ekhanyayo ibonakala igxile ekamelweni, elimnyama, elincane - lifihle indawo.
Ukuthungwa nakho kudlala indima ebalulekile, ngoba amaphuzu ayisihluthulelo wokuhlobisa asemininingwane. I-Parquet ingaba nemifudlana ene-V eceleni kwe-perimeter noma eceleni kwengxenye ende yephaneli. I-plinth kumele ibe nombala ofanayo (ofanayo) nephansi noma izindonga.
Ifenisha kanye ne-parquet base kufanele ihluke komunye nomunye okungenani ama-2 amathoni futhi mhlawumbe ngokwezinto ezibonakalayo, noma kubalulekile ukuhlukanisa izingxenye zombala ngaphakathi (i-carpet, ikhethini). Emklamo wamafulethi, i-parquet evela e-oak yemvelo ibheka inzuzo nge-walnut emnyama, i-wenge. Amadwala aseTropical ngenxa yokuthungwa kwawo (i-jatoba, i-teak, i-doussya, i-merbau) kungcono ukuhlanganiswa nemibala ephathekayo ye-pastel noma ama-shades ahlukene amhlophe.
Esiklanyweni sezansi inhlanganisela yepereti ngamateyili isetshenziswa. Lena indlela ezuzisayo yokweqa igumbi ezindaweni, isibonelo, igumbi lokudlela kanye nendawo yokuphumula.
Ukuhlobisa kwe-Wood Wall
Ukwakhiwa kwehholo endlini
Ukubhekana nama-tile wokuhlobisa kwangaphakathi
Amakhethini endophi ngaphakathi
Indlela yokwenza i-mosaic ngezandla zakho siqu?
Izibani zokuKhisimusi ezihlobisa
I-Chandelier yezintambo ngezandla zabo
Indoda ethandana noCapricorn iziphatha kanjani?
Amantombazane angakwazi ukuhlukumeza?
U-Scarlett Johansson washintsha umbala wakhe wezinwele futhi wahlangana noColin Joost
I-pincers ne-cottage shizi
I-spice - izimpawu zokusetshenziswa
Yini izibungu ezibukeka njengezinkathi?
Ubisi ebusuku - okuhle nokubi
Umqeqeshi we-Corset Waist
Ukulimala kwe-CNS ye-Perinatal
Izingubo Zesifazane - Spring 2014 Collection
Indlela yokwenza isitulo?
I-Myocarditis yenhliziyo - iyini?
U-Heidi Klum uthumele ividiyo epholile eshaweni hhayi nje kuphela!
T-Shirts Women's Stylish